8 -da mobilada ee ugu wanaagsan wax ka yar 200 euro - Sebtember 2021 | Androidsis
Mobilada ugu fiican wax ka yar 200 euro
Bedelida taleefankaaga gacanta waligiis shaqo fudud ma uusan noqon. Maaha kahor, markii mobiladu ay aad ufududnaayeen oo qofkastaaba si lamid ah ayuu sameeyay isla markaana ay adagtahay inuu wax kabadanyahay naqshadeynta, mana ahan hada, suuq ay dalabku wuu sii kordhayaa oo waa ka tayo wanaagsan yahay, aaladuhu waxay u muuqdaan inay ka jaban yihiin sidoo kale, mararka qaarkood, khadkaas wanaagsan ee kala soocaya safafka hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sare ayaa lagu madoobaaday iyadoo ay ku jiraan astaamo caan ka ah taleefanka qaaliga ah marka loo eego qalabka aan baadhayno.
Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa xulasho qaar ka mid ah mobilada ugu fiican wax ka yar 200 euro, iyadoo fikradda ah in jeebkaagu uusan aad u saameyn. Laakiin wixii ka sarreeya, waxaan isku dayeynaa inaan ku siino talooyin taxane ah oo kaa caawin doona markaad dooraneyso. Ma bilaabi karnaa?
1 Mobiles-ka dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan wax ka yar 200 euro
1.5 Jiilka 5aad Moto G
2 Sida loo doorto taleefanka gacanta ugu fiican wax ka yar 200 euro
2.2 La qabsiga baahiyahayaga
2.3 Qiimaha lacagta
Mobiles-ka dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan wax ka yar 200 euro
Sidaad horeyba u ogayd, xulashadan waxaan u dejinnay xadka 200 euro, oo ah "rasmiga" caqabadda udhaxeysa meelaha hoose iyo kuwa dhexe. Laakiin is deji! Dhammaan aaladaha taleefanka gacanta ee aan hoos ku tusi doonno waa kuwo tayo wanaagsan leh oo buuxinaya baahiyaha iyo rajooyinka laga qabo inta badan adeegsadayaasha..
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa dhinacyada qaarkood:
Telefoonada casriga ah sicirka si joogto ah ayey u beddelaan; waxaa jira dalabyo, qiimo dhimis, dalacsiin iyo qiimo dhimis fudud, sidaa darteed waxaa macquul ah in mobiillada soo geli kari waayey xulkan sababo la xiriira inay ka sarreeyaan xadka qiimaha, ay ku sameeyaan maalmo yar gudahood.
Tirada telefoonada gacanta ee Android ee ka hooseeya 200 euro waa kuwo cajiib ah, wayna sii kordheysaa. Sidaa darteed, "Kuwa jira oo dhammi ma aha, iyo kuwa jira oo dhami ma aha". Waxaa laga yaabaa inaad qaar ka maqnaato, laakiin xusuusnow inay xulasho tahay.
Xulashada soo socota MA AHA darajo, laguma dalbo nooc kasta oo doorbid ah, way iska fudud yihiin qaar ka mid ah mobilada ugu fiican wax ka yar 200 euro inaad ka heli karto suuqa maanta.
Oo hadda, aan bilowno!
Waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad, Redmi Note 4 oo ka socota Xiaomi, oo ah taleefan casri ah oo cajiib ah oo aan ka heli karno wax ka badan 150 euro oo leh awood 16 GB ah, iyo illaa 175 euro oo leh 64 GB (waxay kuxirantahay iibiyaha, dabcan ). Redmi Xusuusin 4 ayaa la yimid Android Marshmallow hoosta lakabka quruxda badan ee MIUI 8, a 5,5-inji shaashad FullHD ah, Processor MediaTek Helio X20 ilaa 2,1GHZ, 3 ama 4 GB oo RAM ah, laba SIM, 16 ama 64 GB oo ah keydinta gudaha, taageerada kaarka MicroSD, waa wax cajiib ah 4.100 mAh baytariga. Marka la soo koobo, waa mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu quruxda badan uguna awoodda badan suuqa wax ka yar 200 euro.
Waxaan u boodnay shirkadda weyn ee Kuuriyada Koonfureed iyo Galaxy J5, oo ah taleefanka gacanta ee Android oo aan heli karno Halkan sidoo kale qiimo ku wareegsan 155 euros qiyaastii. Taleefankan casriga ahi wuxuu leeyahay 5,2-inji Super AMOLED, 2GB xasuusta RAM, 16 GB oo kaydinta gudaha, 13 megapixel kamarada weyn, oo ah Ultra Power Saving Mode oo ku habboon fidintaada 3.100 mAh baytariga, dual SIM, iswaafajinta kaararka microSD ... Dhibaatada ugu weyni waxay tahay inay ku timaaddo Android 5.1 Lollipop laakiin sidaas oo ay tahay, waa mid ka mid ah taleefannada ugu fiican ee ka yar 200 euro qiimaha lacagta.
Harvest Made in Spain waa taleefankan casriga ah ee cajiibka ah ee horey loogu soo gudbiyay nidaamka hawlgalka Android 7.1.1 Nougat. Waa wax ku saabsan BQ Aquarius U Plus, kaas oo la yimaada a 5-inch shaashadda IPS oo leh xallinta HD (1280 x 720 pixels), 430 GHz processor Octa-core Snapdragon 1,4, 2 GB RAM, iyo 16 GB oo kaydinta - lagu ballaarin karo gudaha kaarka microSD illaa 64GB dheeri ah, 3.080 mAh baytariga iyo wax badan oo dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha ku xeeran 188 euros. BQ wuxuu noqday mid kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee tikniyoolajiyadda Isbaanishka, qalabkan ayay markale ku xaqiijisay.
Shirkadda Huawei kama maqnaan karin xulkan moobilada ugu fiican wax ka yar 200 euro, waxna waa soo saaraha ugu horreeya ee suuqa ugu weyn adduunka, Shiinaha, waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan adduunka oo dhan. .
El Huawei P8 Lite u taagan yahay iyada naqshad qurux badan oo taxaddar leh, oo dhumucdiisuna tahay 7,7 milimitir oo keliya, oo leh dusha gebi ahaanba siman, iyada oo aan la bixin. Waxay leedahay processor octa-core Kirin 620, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo keyd gudaha ah oo aad ku ballaarin karto kaarka microSD, nidaamka kordhinta maqalka ee caqliga badan iyo inbadan oo hada aad kaheli karto qiima jira 150 euros.
Kani waa taleefan casri ah oo casri ah maalinba maalinta ka dambaysa, oo ay taageerto haybadda iyo tayada Lenovo - Motorola. Waxay ka samaysan tahay aluminium iyo dhaldhalaalka dheemanka ah ee siiya muuqaal dhammaystiran, waxay leedahay shaashad 5-inji ah oo FullHD ah, Snapdragon 430 sideed-core processor 1.4 GHz, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo ah kaydinta gudaha ee la ballaarin karo, kamaradda weyn 13 megapixel , Batari 2.800 Mah iyo Android 7 Nougat. Qiimaheeda? Hareeraha 189 euros on Amazon.
Shirkadaha kale ee ugu caansan Shiinaha ee adduunka galbeedka waa Meizu, oo si gaar ah ula taagan tan Wax alaab ah lama helin., taleefan smart smart leh Shaashad dhan 5,5-inji oo FullHD ah oo leh awood awood yar awood, jirka oo dhan-bir ka samaysan yahay 6000 Taxanaha aluminium iyo 4.100 mAh baytariga.
Intaa waxaa sii dheer, waxay isku dhafan tahay sideed-koronto, tamar-sare tamar-badan oo processor-ka Helio P10 ah oo ay la socdaan 860-bit Mali T64 GPU. Oo intaas oo dhanna waa qiime mararka qaarkood ka hooseeya 145-150 euro.
Sidaas ayaan ku imaanay shirkad kale oo Aasiya ah, oo aad uga yar sidii hore kuwii hore laakiin soo ifbaxay in muddo ah qalab tayo sare leh iyo qiimayaal aad u kooban. Xaaladdan oo kale, Elephone S7 sidoo kale waa mid ka mid ah moobiillada ugu fiican ee ka yar 200 euro oo aad maanta heli karto.
Xaqiiqdii, naqshaddu waxay ku xusuusin doontaa wax badan oo ka mid ah Galaxy S7. Waxay leedahay a 5,5 inch screen oo leh difaac Gorilla Glass 3 iyo xallinta 1280 x 1920, iyo muuqaal aad u qurux badan, qurux iyo dhalaal leh.
Gudaha, a Helio X20 64-bit processor 10-xudun leh 3 ama 4 GB oo RAM ah iyo 32 ama 64 GB oo keyd ah lagu ballaarin karo gudaha kaarka microSD. Waxay bixisaa a 13 megapixel kamarad weyn oo duubaya fiidiyowga 1080p, autofocus, laba SIM, akhristaha sawirka faraha, 3.000 mAh baytariga iyo, sida nidaamka hawlgalka, Android Marshmallow.
In kasta oo si rasmi ah qiimihiisu uga bilaabmayo 229 euro, badiyaa waa waxaa laga heli karaa amazon iyo iibiyayaal kale in ka yar 200 euro.
Waxaan ku dhameysaneynaa nooc taxane ah oo loo yaqaan 'Xperia taxane' oo laga soo qaatay Japan-ka Sony, oo ah taleefan casri ah oo bixiya shaashad 5-inch HD ah oo ay ku yaalliin processor Mediatek Helio P10, oo ay wehliyaan 2 GB oo RAM ah iyo batari yar oo tayo leh laakiin 2.300 mAh.
Iyada oo kamarad weyn 13-megapixel iyo 8-megapixel camera hore, ka Xperia XA, taas oo horeyba u aragtay in hoos loo dhigay qiimaheeda, waa mid kale oo ka mid ah ikhtiyaarrada qiimaha ugu tayada wanaagsan ee ka hooseeya 200 euro.
Sida loo doorto taleefanka gacanta ugu fiican wax ka yar 200 euro
Cunsurka ugu weyn ee aan dhammaanteen tixgelinno marka la beddelayo taleefannada gacanta (si fiican, ku dhowaad dhammaantood) waa qiimaha, hase yeeshe, mar haddii aan ogaanno inta aan gaari karno, waa marka ay bilaabmayso hawsha cakiran ee doorashada. Iyo inkasta oo ay run tahay in, marka si guud loo eego, ay jiraan taleefano gacmeedyo kuwa kale ka fiican, kana awood badan, teknoolojiyad casri ah oo dheeri ah, astaamo dheeri ah leh, iwm. mobilada ugu fiican ayaa ah in sida ugu fiican ay uga jawaabaan baahiyaha isticmaalaha. Tusaale ahaan, haddii aanan waligey duubin fiidiyowyo, maxaan ugu kharash gareeyaa moobil duubaya fiidiyowyo kafiican?
Markaad dooranayso taleefan gacmeed cusub oo lagu beddelo terminaalkeenna hore, ayaa ugu habboon fiiro gaar ah u yeelo saddex cabbir oo aad u gaar ah:
Waa hagaag, halkii, miisaaniyadda. Haddii aynaan haysan lacagta oo dhan adduunka, waxaa fiican inaanan "gubin dhiiggeena" adoo fiirinaya taleefannada gacanta ee aan ognahay inaannaan awoodin inaan iibsanno. Kiiskan, waxaan xadka u dhigeynaa 200 euro. Dad badan, tani waa soohdinta udhaxeysa dhamaadka-hoose iyo bartamaha-dhexaadka, si kastaba ha noqotee, sidii aan horeyba ugu sii horumarnay bilowgii, xadkaas waa sii badanayaan, markaa yaan lagu kadsoomin. Liistada aan halka hoose ku keenayno, waxaad ku arki kartaa inay jiraan mobilo aad u wanaagsan oo qiimahoodu aad u wanaagsan yahay.
La qabsiga baahiyahayaga
Waxaan horeyba u sheegnay bilowga, waana ku adkeysaneynaa. Waa wax fudud sida aanad u bixinayn wixii aadan isticmaali doonin. Ka fikir waxa aad ugu baahan tahay taleefanka, ka fikir sida aad u isticmaali doontid iyo sida aad u siineyso terminal-kaaga cusub, oo raadi nooca sida ugu fiican u buuxiya rajooyinkaaga. Mararka qaar waxaan ku qaadnaa sifooyin waaweyn oo qaali ah, runtiina, weligeen ma isticmaali doonno. Xaaladdan oo kale, waxaan si gaar ah u ilaalinaynaa dhinacyada sida cabbirka shaashadda, tayada kamaradda, awoodda keydinta gudaha, iyo wixii la mid ah.
Waa dhinac si dhow ula xiriira kii hore, kaas oo falanqaynta ugu fiican iyo isbarbardhiga ururada macaamiisha ay il gaar ah ku hayaan. Noocyada waawayn sidoo kale waxay la macno yihiin qiimo aad u weyn, waa arrin sharaf, khasnado, gaar ahaaneed, xayiraad ama wax kastoo aan dooneyno inaan ugu yeerno, laakiin sicirka sare macnaheedu maahan tayo sare, Marka, aan iska jirno.
Sidaa darteed, in la sameeyo xulasho wanaagsan, waxa ugu fiican ayaa noqon doona inaad si deggan ku tagto; Aynu aamusnaan u fadhiisanno dhowr daqiiqo, dejinno xaddidaad aan awoodno ama diyaar u nahay inaan bixinno, aan baarno sida aan u isticmaalno taleefannada casriga ah ee hadda jira iyo waxa aan u baahanahay, halkaasna, aan ka bilowno fiirinta xulashooyinka iyada oo aan luminaynin wax walba. iyo saamiga tayada-hore u caan baxay.
Iyo illaa iyo hadda xulashadan moobiillada ugu fiican wax ka yar 200 euro. Waxaan ku soo darnay boosteejooyin, taas oo aan xumaan, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inay jiraan kuwo kale oo badan. Xusuusnow taas Waxa muhiimka ah maahan soo-jeedimadeenna, laakiin waa inaad doorataa terminal-ka ku habboon waxyaabaha aad ka filayso, isticmaalkaaga iyo baahiyahaaga.
Waa maxay mobilka ka yar 200 euro ee aad ku dari lahayd liiska?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Mobilada ugu fiican wax ka yar 200 euro
Alberto Suarez muuqaalka booska dijo
Su'aal: Xiaomi redmi note 4 miyuu ku yimaadaa nooca 32 gb ROM? Maaddaama ay kaliya tixraacayaan 16 iyo 64 gb
Ku jawaab Alberto Suarez
Salaan Alberto. Haa, waxaa lagu heli karaa 32GB ROM.
Markaad ikhtiyaar u leedahay, midkee ayaad ka iibsan lahayd mootada G5 ama bq Aquarius u oo lagu daray 3 gigabytes oo wan dabcan aad baad ugu mahadsan tahay caawimaadda
Waa hagaag, iyadoo la tixgelinayo inay isku qiimo yihiin laakiin BQ waxay leedahay batteriyaal badan, aniga oo Spain jooga ayaa xarig u tuuri lahaa shirkadda Isbaanishka waxaanan dooran lahaa BQ Aquarius U Plus. Laakiin kaalay, waa uun ra’yi.
Aad baad ugu mahadsantahay booqashada aad nagu soo booqatay.
Dacar Junior dijo
Caawinaad: sida aad u aragto, moobiilkee u muuqda mid dhammaystiran, meizu m5 note ama xiaomi redmi note 4, ayaa ah inaan doonayo inaan iibsado midna aanan go'aansan, horay ayaan ugu mahadcelinayaa
Ku jawaab Junior didac
Waad salaaman tahay Junior. Hagaag aan aragno, feker ahaanteyda labaduba aad ayey isugu egyihiin, xitaa batteriga (waxaan filayaa inaad u jeedday Meizu M3 Note), Meizu-na way ka jaban tahay Redmi Note 4, marka arrimaha dhaqaalaha, Meizu. Hadda, naqshadda Xiaomi iyo MIUI 8 lakabka ayaa iga lumaya, oo haddii aad isticmaasho wax qalab ah oo Xiaomi ah, sida Mi Band, si fiican ayaa loo fahmay, marka dhinacaas ayaan la sii joogi lahaa Xiaomi. Labaduba waa boosteejooyin aad u wanaagsan sidaa darteed, inaad dhibaato dhibaato ah qabtid mooyee, oo dhici karta, midkoodna waa ikhtiyaar wanaagsan.
Waxaan rajeynayaa inaan ku caawiyay, xitaa xoogaa hehe.
All fiican !!
Marka loo eego shuruudahaaga, yaa ka fiican (dhan kasta) Samsung Galaxy J5 ama Motorola G5
Waad salaaman tahay, waxaan eegay mobayl dhan € 150 waxaana shaki iga qabaa Bq aquarius U2, Huawei Y6 Pro iyo Xiaomi Redmi 4x.
Iskusoo wada duuboo waxaan shaki ka qabaa lakabka habeynta astaan ​​kasta, maxaa yeelay awoodeeda xasuusta aniga hoos uma sii dhigeyso aniga, iyo kaamirada.
Labadaas arrimood ayaa iga yeeli doona inaan go’aansado runtiina waxaan shaki iiga jiraa moodooyin badan. Dukaanka aan eegay waxay igu adkaysanayaan in Bq uu aad uga fiican yahay, taasna shaki bay iga gelineysaa
Haddii qof i caawin karo aad baan u mahadcelin lahaa.
OnePlus 3 iyo 3T waxaa loo cusbooneysiin doonaa Android O dhamaadka 2017
Facebook Messenger wuxuu ku darayaa falcelin iyo miirayaal wicitaanada fiidiyowga